MacOS zvinoshandiswa zvichauya kuGnu / Linux gore rino | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji venyu mava kutoziva Waini nemhinduro dzayo kuti mukwanise kumhanyisa Windows zvinoshandiswa paLinux. Iko kune zvakare mukana wekuisa Windows zvinoshandiswa paMacOS nekutenda kuWine.
Nekusvika kweBash kuWindows 10, kusvika kweLinux kunyorera kuWindows kuchakwanisika, asi Ko zvakadii neMacOS kunyorera Linux? Pane here chishandiso chekuita izvi?
Ini pachangu handizive chero maturusi anozoita ino virtualization kana kushanda chaizvo, asi izvi zvinogona kuchinja mukati megore rino. Muna 2012 akaberekwa chirongwa chinonzi mudiwa, chirongwa chakatsvaga kuisa macOS kunyorera kuLinux. Ichi chirongwa chainakidza asi Hatina chatakaziva nezvazvo kwemakore mashanu.
Iyo Darling Project inowedzera vashandi vayo pamwe nemaraibhurari kutevedzera maitiro eMacOS
Nekudaro, iye mugadziri weprojekiti akazivisa kuti akaverengerwa vamwe vanogadzira purojekiti iyo inobvumidza kugadziriswazve kwayo, ichiita kuti ibudirire kupfuura pakutanga, ndiko kuti, kugadzira mhinduro chaidzo. Pfungwa ndeye kuchinja maraibhurari anoshandiswa kumashandisirwo eMacOS kuti ave anoshanda muLinux. Izvi zvichatanga kushandisa Match-O nemaraibhurari eEFL kuti zviite izvi.
Mamwe mashoko nezve izvi anogona kuwanikwa mu iyo yepamutemo webhusaiti yepurojekiti, asi zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti gore risati rapera tichawana mhinduro chaiyo yatinogona kuisa kune avo vanotsvaga mhanyisa macOS kunyorera pane yedu Gnu / Linux kugovera, senge inozivikanwa iTunes kana iBooks kubva kuApple, pakati pemamwe akawanda macOS ekushandisa.
Iyo Darling Project inoita kunge ichave imwe ye mapurojekiti anozivikanwa kwazvo mukati megore rino ra2017, kunyangwe pachangu ini pachangu ndichida kumhanyisa kunyorera zvikumbiro zveLinux, ndiko kuti, kopi yakaipa yeTunes kana maPage, zvichave zvirinani pane kuteedzerwa kwechirongwa ichi, zvinoita sezvisinganzwisisike asi nekufamba kwenguva zvinotipa matambudziko mashoma uye mamwe mufaro. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » MacOS kunyorera kuchasvika paGnu / Linux gore rino
Zvakanaka kana iri "emulator", ndeipi bios romset, zvingave zvichidikanwa kumhanyisa izvi zvinoshandiswa? Pane zvingasarudzwa, tinga sarudza processor ipi nezvimwewo?
Ini ndinofunga mamwe mapurojekiti akaita sePCEm anodawo rubatsiro mune yavo vhezheni yeGNU / Linux. :) sezvo ichibvumidza kuteedzera pcs dzekare :)
Pindura kune inukaze
Uye kupokana kuchamuka kuti paMacBook yangu yakare (ine Snow Leopard) ini handikwanise kumhanyisa vhezheni yechimwe chirongwa uye pane yangu yakatokura HP (ine Ubuntu) ndinogona. Kutonhora. :-)
Jock vault akadaro
Ini ndanyadziswa kuti chirongwa ichi hachidanwe: cider.
Pindura Jock Vault